के उषा र पूजाले जित्दैमा कांग्रेसमा युवाको सहभागिता पूर्ण हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको चटारोमा छ । यही मेसोमा उसले प्रदेश समिति चयन गर्ने प्रतिनिधि र प्रदेश क्षेत्रका पदाधिकारी चयन गरिसकेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र संघीय निर्वाचन क्षेत्रका पदाधिकारीको परिणाम मंगलबार साँझसम्म आईसक्ने छ । यो साता प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेमा केही युवाहरु सामाजिक संजाल र अनलाइनका समाचारमा खुब छाएका छन् । युवा पुस्ताका उनीहरुले कांग्रेसको प्रतिनिधिका रुपमा सानदार मत ल्याएर विजयी भएकोले चर्चाको शिखरमा पुगेका हुन ।
शनिबार भएको प्रदेश सभा अधिवेशनमा बागलुङबाट १८ वर्षीया उषा सापकोटा क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित भइन् । उनले आ पार्टीको उम्मेदवार जिताउन सक्रिय बन्ने तर अरु पदको लागि चुनाव नलड्ने घोषणा गरेकी छन् । उनले सामाजिक संजालमा हालेका धेरै तस्बिर अहिले भाइरल नै बनेका छन् ।
सापकोटाले २८६ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी थिइन् जुन उनी उठेको निर्वाचन क्षेत्रका अन्य उमेदवारमा सबैभन्दा धेरै मत थियो । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ की उषाले क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा ‘क’बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि जितेकी हुन् । अब उनले मंसिर १६ र १७ गते हुने गण्डकी प्रदेश समितिको अधिवेशनमा मतदान गर्न पाउने छिन् ।
खासमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सापकोटाको तस्बिर राखेर आफ्नो ट्विटर ह्याण्डलबाट बधाई दिएपछि सापकोटा समाचारको विषय बन्न पुगिन । उनको चर्चा देशभर एकाएक युवा उमेदार उत्कृष्ट मतसहित विजयी भएको भन्दै भयो । कांग्रेसका धेरै नेताले उनलाई बधाई दिए । प्रवक्ता शर्माको ट्विटको सन्देश थियो–कांग्रेसमा युवाहरुको लागि पनि ठाउँ छ । मेहनत गर्दा उनीहरु पनि विजयी बन्छन् । युवाधार कांग्रेसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । सापकोटा जस्तै सोलुखुम्बुकी २१ वर्षीया पूजा फुयालको पनि यो साताभर चर्चा भयो । उनी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएकी छन् । आइतबार भएको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि फुयालले ४०३ मत ल्याएकी थिइन् । पूजा भक्तपुरस्थित सानोठिमी क्याम्पसमा नेविसंघको राजनीति गर्छिन् । यसअघि सोलुखुम्बुकै नेचा–सल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर ३ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेकी थिइन् । त्यसबेला पनि उनले २०२ मतसहित निर्वाचन जितेकी थिइन् । विजयी भएपछि पूजालाई बधाई थाप्न भ्याई नभ्याई छ भने कांग्रेस नेताहरुले यी युवा प्रतिनिधिको उदाहरण पेश गर्दै युवा नेतृत्वको विषय उठान गरिरहेका छन् ।
पूजा र उषाको विजय प्रतिनिधिमुलक मात्र हो । कांग्रेसले आफूलाई समावेशी पार्टीको दर्जामा राख्ने गरेपनि पार्टीभित्र युवापंक्तिका नेताहरु विचारका प्रखर छन् तर नेतृत्वमा भने उनीहरुको कमजोर अवस्था घाम जत्तिकै छर्लङ छ । के पूजा र उषा निर्वाचित हुनुले कांग्रेसभित्र युवाको भूमिका मुखरित हुन सक्छ ? के कांग्रेसले युवालाई साँच्चै नै स्थान दिएको छ ? के कांग्रेसका युवा नेता सैद्धान्तिक रुपमा विचलित बनेको पार्टीलाई यसको वास्तविक बाटोमा डोहोर्याउन सक्षम छन् ? अनि संधै नेतृत्वको ठाउँ ओगटेर बस्ने र युवालाई नेतृत्वमा आउन तगारो लगाई रहने नेताले बाटो छाड्लान ? आदि धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
महाधिवेशनको संघारमा केही अगुवा नेताको आर्शिवादको भरमा विजयी बनेका उमेदवार भाईरल हुनुले खास महत्व राख्दैन । किनभने युवाले नेतृत्व गर्ने कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरु आफैं अद्यावधिक चुनावको अभावमा लंगडोप्राय छन् । कतिपय संगठन वर्षौसम्म महाधिवेशन नभई त्यत्तिकै छन् । एक पटक जनमत पाएर नेतृत्वमा पुगेका भ्रातृ संगठनका युवालाई ‘पेन्डुलम’ बन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने नेताहरुले युवालाई नेतृत्वमा अवसर देलान भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न् । नेतृत्वमा युवाको पहुँच युवाले नै स्थापित गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ ।
हुनत कांग्रेसको उमेर कति भएछ भनेर पछि फर्कने हो भने ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’बाट गणना गर्न सकिनछ । यो हिसाबले पार्टीको उमेर ७५ औं वर्ष पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसको अबको नेतृत्व लिन लगभग त्यत्तिनै उमेका नेताहरु अहिले पनि जुर्मुराएका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट खारिएकाहरुले नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको अवसर पनि प्राप्त गरेकै हुन । तर, के १४ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको बागडोर सम्हाल्न प्रतिनिधि पात्रको रुपमा न भएर क्षमतावान र वास्तविक युवा उमेदवारले अवसर पाउने छन् त ? के उनीहरुलाई जित्नबाट रोक्न तिक्डमबाजी हुने छैनन् ? युवा नेतृत्व र चुनावमा उनीहरुको सहभागिताको विषयमा यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तिरित छन् ।
मङ्गलबार, ०७ मंसिर, २०७८